Cashar Cashar: Si Deg Deg Ah Ugu Xulo Nooca Sawirka Sawirka | Abuurista khadka tooska ah
Antonio L. Carter | | muujiye, Tababarada
Isticmaalka qalab waxaa lagu heli karaa hab raaxo leh oo macquul ah, waa mid ka mid ah xirfadaha lagama maarmaanka u ah naqshadeeye kasta ama horumariyaha ku habboon milixdiisa, maadaama adduunyada barnaamijku aysan had iyo jeer lahayn barnaamijka ayna yaqaanaan a qalab la mid maaha sida loo yaqaan sida loogu isticmaalo macquul ahaan.
Midkan cusub tutorial, waxaan qaban doonnaa howsha xulashada a suugaanta qoraalka si deg deg ah. Maxaa jaleecada hore u muuqan kartaa mid fudud, way yara adkaatay markii aan ka soo dagsanay Internetka 1500 xarfo oo bilaash ah, waxaan isla rakibeynay 4ooo aan haysanay iminkana qaar badan oo ka mid ah ayaa la mid ah waana adag tahay inaan si gaar ah u sheegno fikrad. Tan waxaan maanta kuugu keenayaa mid cusub Casharbarka: Si Deg Deg Ah U Xulo Muuqaaleedka Sawirka. Waxaan rajeynayaa inay waxtar kuu leedahay.
Barnaamijyada kala duwan ee qolka Adobe, waxay leeyihiin toobiyeyaal kaladuwan iyo shaqooyin kaladuwan, markaa mararka qaarkood wax ku samee Photoshop oo ku dhex sameeya muujiye (tusaale ahaan) maahan inay isku mid ahaadaan ama isku si u qabtaan. Taasi waa sababta aan u aaminsanahay inay aad muhiim u tahay in la caddeeyo adeegsiga farsamooyinka kala duwan ee wax looga qabanayo qalab, xitaa haddii ay yihiin kuwa ugu fudud, si loogu caawiyo xoogaa isticmaalayaasha Suite-ka Adobe neophytes badan. Qoraal hore waxaan ku aragnay Waa maxay Aadaabta Photoshop?, halkaas oo aad ka heli doontid macluumaad aad u xiiso badan oo ku saabsan barnaamijyada Adobe.
Arrintan tutorial Waan arki doonaa sida aan ugu dooran karno font qoraal qoraal ah iyadoo la adeegsanayo dhowr nidaam oo ay leedahay muujiye karti u yeeshay Tani, oo jaleecada hore u muuqata mid fudud, waxay noqon kartaa hawl aad u daal badan haddii aan si sax ah loo sameyn. U tag.
Marka hore, ka furo dukumiinti cusub gudaha Adobe IllustratorMacno malahan hadii ay tahay mid web ama daabac.
Hadda waxaan dooranaynaa qoraalka aan qaabeyn doonno, annagoo raadineyna font leh a suugaanta qoraalka in aan jecelahay mashruuceena oo aan ku qoreyno qalabka qoraalka ee Adobe Illustrator. Casharradan ayaa ansax u ah mid kasta muujiye ka socda Suugaanta Hal-abuurka ah. Waxaan qoray halyeeyga: Creativos Online. Waxay u muuqatay mid habboon.
Mar alla markii aad haysato qoraalka aad wax ka beddelayso, waxaan ka dooran doonnaa font nooca ii muuqda sida ugu dhaqsaha badan ee aan ku dooran karo font. Guji qoraalka si aad wax uga beddesho
Haddaba tag xagga sare ee interface ka Adobe Illustrator, gaar ahaan sanduuqa xulashada ee laga helay baararka xulashooyinka qalab, kaas oo ah baarka labaad ee korka ka imanaya, oo ku xiga raadinta.
Sanduuqani waa mid ka mid ah siyaabaha kala duwan ee aan u qaadan karno sixitaanka ama u beddelka qoraalka si fudud oo iskiis ah, in kasta oo aan sidoo kale leenahay sanduuqa wada hadalka ee qalab qoraalka si ay u awoodaan inay sameeyaan. Marka aan helno sanduuqa aan soo sheegnay, waan ku riixnaa oo waxaan doorannaa qoraalka meesha ku jira.
Markaad haysato qoraalka si aad wax uga beddesho doorashada (midab cad oo madow) iyo qoraalka sanduuqa wada hadalka qalab waxay ku taal baararka xulashooyinka qalab in aad ku leedahay qaybta kore ee is-dhexgalka, labada ikhtiyaar ee la doortay, waa inaad riixdo badhanka kor iyo hoos ee kiiboodhkaaga si aad ugu daawato jirka qoraalka aad rabto inaad wax ka beddesho ama aad qaabeyso, noocyada kala duwan qoraal ahaan waad kala dooran kartaa.
Marar badan, waxaan rakibnaa qoraalada kuwaas oo ku yimaada baakadaha font ee ay ku jiraan kumanaan cunsur, tanina waxay sababaysaa in naloo soo bandhigo galkayaga, noocyada gabi ahaanba la mid ah kuwa kale ee magacyo kala duwan leh, ama sidaas ayay ugu muuqataa jaleecada hore. Si looga fogaado jahawareerka, waxaad ku dhejin kartaa xarfaha aad ugu jeceshahay qoraalka aad wax ka beddeli doontid ka dibna aad is barbardhigayso. Si si fudud loo nuqulo waxaan u qaadan karnaa toobiye kumbuyuutarka adoo riixaya furayaasha Crtl iyo Alt markii aan dooranay qalabka Xulista, oo guji xulashada aan dooneyno inaan nuqul ka sameysano ka dibna sii deyno, waxaan haysan doonaa nuqul la sameeyay.
Nidaamkan waxaan ku barbardhigi karnaa font-ka si deg deg ah, oo aan u istaagin inaan eegno liiska qoraalada la heli karo oo ay tahay inaad ku qiyaasto qoraalkeena. Waxaan rajeynayaa inaad waxtar laheyd oo aad ii sheegto waxa aad ka aaminsan tahay casharka. Haddii aad hayso wax codsi ah tutorial, ku dhaaf faallooyinka waxaanan kaa caawin doonaa inaad ku faraxdo.
Macluumaad dheeraad ah - Waa maxay Aadaabta Photoshop?
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » muujiye » Casharbarka: Si Deg Deg Ah U Xulo Muuqaaleedka Sawirka
Sida loo sameeyo miisaaniyad qaabaynta webka | Talooyin iyo Kheyraad